Basagubeka aboHlanga ngemfundo yabakhubazekile - Bayede News
Basagubeka aboHlanga ngemfundo yabakhubazekile
Libanguliwe iva lomphakathi wasOlundi ngomgwaqo
NAKUBA uMnyango Wezemfundo kuzwelonke ugqugquzela ukuba imfundo ibekwe phambili eNingizimu Afrika, kepha ukungahleleki kwezinsiza kulabo abaphila nokukhubazeka ezikoleni zasemakhaya nasemalokishini kugcina kuphendule imfundo ibe ngeyomntakabani kwaboHlanga.
Kulezo zikole ezisezindaweni zabamhlophe noma emadolobheni, abafundi abaphila nokukhubazeka banezinsiza ezifanele futhi banezikole zabo ezibhekene ngqo nalokho kukhubazeka abasuke bebhekene nakho. Isibonelo isikole i-Umbilo Open Air School, esingaphandle kancane kwedolobha iTheku. Lapha kufunda abafundi abaphila nokukhubazeka okwehlukene.
Ngokusho kukaSihle Mntungwa oke wafunda kulesi sikole esiseMbilo, abaphathi baso babhekisisa kahle ukuba ngabe abazali bomfundi ikhona yini inkece abayitholayo futhi ngabe ingakanani. Uthe uma uhlala ngaphakathi esikoleni imali ekhokhwayo yenyuka kakhulu kwazise lowo mfundi usuke enezisebenzi ezimnakekelayo kulolo hlobo lokukhubazeka asuke enalo.
Lokhu kubukeka kuseyiphupho ezindaweni zasemalokishini nasemakhaya. Okokuqala nje okufike kube yingqinamba enkulu ukuthi kunesimo lapho uthola ukuthi akukho noyedwa emndenini osebenzayo. Lokhu kugcina kuphoqe ukuthi umfundi ophila nokukhubazeka afakwe esikoleni esiseduze nalapho ehlala khona. Phakathi kwezingqinamba abhekana nazo ileyo yokuthi uzithola ecwaswa ngabanye abafundi abangakhubazekile, bambize ngamagama noma ngesici sakhe.
Ngaphakathi esikoleni azikho izinsiza ezelekelela abaphila nokukhubazeka kwazise isikole sisuke sakhelwe abafundi abangaphili nokukhubazeka. Lapha sibala amathoyilethe, izitebhisi, namadesiki okuhlala nokunye. Lokhu kwenza kube nzima ngisho ukuya endlini encane kubafundi abaphila nalesi simo. Okufika kube nzima kakhulu ukuthi ngisho nothisha imbala abafundisa kulezi zikole abanalo uqeqesho olukhethekile lokufundisa abafundi abaphila nokukhubazeka. Lokhu kwenza umsebenzi kathisha ube lukhuni satshe, kuphinde kuqongise ingcindezi kumfundi ophila nokukhubazeka kwazise kusuke kuduma upotiyane ngenxa yokuthi ezikhathini eziningi bathatha kancane kunalabo bafundi abaphile saka noma abangakhubazekile.
Kungakho-ke ezikhathini eziningi abafundi abakhubazekile noma abazali babo bayaye bathathe izinqumo zokubayekisa ezikoleni “ezejwayelekile” ngenxa yokuthi ziningi izingqinamba ababhekana nazo.
U-Advocate uJoseph Malatji olwela amalungelo alabo abaphila nokukhubazeka ngaphansi kweKhomishini elwela amalungelo abantu iSouth African Human Rights Commission (SAHRC), uchaza imfundo njengelungelo okungafanele likhethe muntu, nathi imfundo iyona esusa inkungu yenhlupheko nokuzenyeza kubantu ikakhulukazi abaphila nokukhubazeka.
“Kungaphela nya ukuzenyeza kulabo abakhubazekile uma bengathola imfundo, futhi bengaba wusizo olukhulu emiphakathini abaphila kuyona. Sibona uHulumeni ezama impela ukusiza abafundi abakhubazekile kepha igebe liselikhulu kakhulu uma kuqhathaniswa nalabo abangakhubazekile. Ziseningi kakhulu izinsiza ezisadingeka kwabakhubazekile. Isibonelo nje ukuthi ucwaningo lwakamuva lusivezela ukuthi kumba eqolo ukufaka umfundi okhubazekile esikoleni, empeleni kuze kwedlule kakhulu kunokufaka umfundi ongaphili ngokukhubazeka,” kusho uMalatji.
Ucwaningo lwabakwaSouth African Human Rights Commission (SAHRC) luveza ukuthi nakuba uHulumeni eqhamuke nenqubomgomo yokuthi izikole zomphakathi zingayikhokhi imali yokufunda, kodwa akwenzeki ezikoleni zalabo abakhubazekile, njengoba kusakhokhwa itshe lemali kuzona.
Ucwaningo luyaveza ukuthi abazali babafundi abakhubazekile bathwala kanzima, njengoba izincwadi zokufunda zabakhubazekile kunzima ukuzithola, kanti nezokuthutha kaziyizwa kahle indaba yokuthatha umfundi ophila nokukhubazeka okugcina sekuphoqa abazali ukuba baqashele izingane zabo izimoto ngokukhethekile.
Izikole eziningi ezizimele ziyakhetha ukuthi zifisa ukuthatha umfundi okhubazeke ngayiphi indlela. Esinye sezikole esiseSoweto, eGoli, i-Albertina Sisulu Resource Centre sinesivumelwano nabazali abahlulekayo ukumelana nokukhokha izindleko zezingane zabo. Okungenani kanye ngesonto abazali bayaphoqwa ukuba bezohlanza isikole noma belekelele kwezemidlalo nokunye ngendlela yokuba bekhokhe.
Ngesikhathi kwenziwa ucwaningo lwabakwaSAHRC abenzi bocwaningo babe nengxoxo ekhethekile nomunye wabazali ongathandanga ukuba igama lakhe lidalulwe. Echaza usizi lwakhe, waveza ukuthi ukhokha imali engama-R400 engaphezulu kwaleyo yesikole, ngenxa yokuthi uthenga amanabukeni endodana yakhe eneminyaka eli-11 ekhubazekile. Uthe nokudla okudliwa indodana yakhe kumba eqolo, njengoba engakwazi ukudla lokho okwejwayekile noma okuhlinzekwa yisikole.
Akanakekelwe umhlengikazi weminyaka wuHulumeni
NgokoMthetho Wezemfundo kulabo abaphila nokukhubazeka kunezinhlobo zezikole ezintathu. Kukhona lezo ezaziwa ngamaMainstream. Lapha kukhona abafundi abangakhubazekile kakhulu, abakwaziyo ukuzenzela okuthile. Ngowezi-2013 kubhalise abafundi abayizi-76 993 ezikoleni eziyizi-3 884 zalolu hlobo kuleli.
Uhlobo lwesibili lwalezi zikole ilezo ezibizwa ngeFull Service. Lapha abafundi bahlala ngaphakathi ezikoleni banakekelwe bathole nosizo ngaphakathi. Ngowezi-2014 izikole zalolu hlobo ezingama-793 zemukele abafundi abayizi-24 724.
Uhlobo lwesithathu lwezikole ezikhethekile ilezo ezibizwa ngamaSpecial Schools. Lapha kusuke kukhona abafundi abasuke benenkinga esezingeni eliphezulu kakhulu edinga ukuqashwa ngeso lokhozi zikhathi zonke. Ngowezi-2014 abafundi abayizi-117 477 baphume ezikoleni “ezejwayelekile” bafakwa kulezi zikole ezingama-453 eNingizimu Afrika jikelele.
Iziphakamiso ezikhishwe ngabakwaSAHRC ilezo zokuthi izikole zingakhethi iphela emasini ekutheni zizothatha abafundi abakhubazeke bafika kuliphi izinga ngoba bonke badinga into efanayo. Esinye isiphakamiso ileso sokuthi uHulumeni uqinisekise ukuthi izikole zabaphila nokukhubazeka ngezamahhala njengoba kuseyiculo okwamanje. Akuphinde kuqinisekiswe ukuthi othisha abafundisa kulezi zikole baqeqesheke ngokwanele.
Okubhekwe ukuthi ezokuthutha abafundi abakhubazekile bayahlinzekwa ngazo njengoba kungesinye sezikhalo ezinkulu kubazali.
nguNgqeshe Buthelezi Feb 2, 2018